Madheshvani : The voice of Madhesh - पाल्हीनन्दनलाई नेपालकै नमुना गाउँपालिका बनाउँछु : बैजु प्रसाद गुप्ता ‘दीपक’
अध्यक्ष, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, नवलपरासी
० पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भएपछि काम गर्न कतिको चुनौती महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
— म अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भएपछि मेरा अगाडि विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू आए । तर ती सबै चुनौतीहरूबाट डराएर होइन, डटेर सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ । गएका दिनहरू मेरो लागि एउटा सिकाइको पाटोको रूपमा लिएँ । सुरूमा विपक्षीहरूले असहयोग, अवरोध गर्ने जस्ता कामहरू गरे, काम गर्न नदिन अप्ठ्यारोमा पार्न खोजियो । त्यसकारणले मैले विभिन्न किसिमका चुनौतीहरूको सामना गर्नुप¥यो ।
० तपाइँले पाल्हीनन्दनमा उल्लेखनीय कार्यहरू के–के गर्नुभयो त ?
— यो गाउँपालिका कृषिमा आधारित जनजीविका रहेकोले सर्वप्रथम हामीले कृषिमा नै विशेष ध्यान दियौं । विगतमा कृषिलाई खासै प्राथमिकतामा राखिएको थिएन । यस्तै, महिलालाई सीपमूलक र व्यापारमुखी कसरी बनाउनेतिर जोड दियौं । त्यसका लागि विभिन्न किसिमका तालिम, स्वरोजगारका कुराहरू ल्यायौं । त्यस्तै, बाटोघाटो निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दियौं । स्वास्थयको क्षेत्रमा हामीले पहिलाभन्दा पनि अहिले गाउँ–गाउँमा गएर स्वास्थ्य शिविर चलाएर काम गरिरहेका छौं । जनतालाई कसरी छिटो र छरितो तरिकाले सेवा पु¥याउने काममा हामी सफल भएका छौं ।
० कृषिमा के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ ?
— कृषिमा खासगरी हामीले तरकारी खेतीलाई विशेष जोड दिएका छौं । जसका लागि खासगरी महिलाहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरेका छौं । गर्न चाहनेहरूका लागि हामीले सित्तैमा बीउबिजन दिने गरेका छौं । त्यसमा लाग्ने रोग निवारणका लागि पनि हामीले चिकित्सक पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । मेरो लक्ष्य नै हो कि पाल्हीनन्दनलाई कृषि जोन बनाउने । हिजोका दिनमा पाल्हीनन्दनमा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट तरकारीजन्य पदार्थहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, त्यो परनिर्भरतालाई हटाउन हामीले कमसेकम आफ्नै करेसाबारी वा खेतमा तरकारी खेती लगायौं भने खान पनि पुग्ने र आर्थिक आम्दानी पनि गर्न पाउँछन् । त्यो हिसावमा हामी लागिरहेका छौं ।
० पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा रहेका ऐतिहासिक धार्मिकस्थलहरू जस्तै पाल्ही भगवती मन्दिर लगायतको स्तरोन्नतिका लागि के छ योजना ?
— नवलपरासी जिल्लाको सदरमुकाम परासीबाट ७ कि.मि. दक्षिण तर्फ रहेको ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पाल्ही भगवती मन्दिर र साविक गेरमी र सनई गा.वि.स. मा ३६ विघामा अवस्थित रहेको नन्दन तालको ऐतिहासिक गाथा बोकेको पाल्ही नन्दन गाउँपालिका साविक को रमपुरवा, हरपुर, कुश्मा, पाल्ही, गेरमी र सनई गा. वि. स. को साझा संगम हो । पाल्ही भगवती मन्दिर, शिव मन्दिर लोहरौली, सोहगौरा मन्दिर पडरी, नन्दन ताल सनई र गेरमी, राधाकृष्ण मन्दिर रामजानकी मन्दिर सुगौली यस गाउँपालिका का मुख्य ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल हुन् । यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूको विकास स्तरोन्नतिका लागि बजेट पनि छुट्याएका छौं । यस्ता ऐतिहासिक स्थलहरूमा हामीले पर्यटक भित्र्याउन सक्यौं भने हाम्रो आर्थिक आम्दानी बढ्नेछ ।
० ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा’ भन्ने नारा पाल्हीनन्दनका जनताले कतिको महसुस गरेका छन् त ?
— पहिला केन्द्रबाट विकासका लागि जुन बजेट आउँथ्यो त्यसको २०÷२५ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैनथ्यो र नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्नेतिर लाग्थ्यो भने अहिले सम्पूर्ण बजेट विकासका लागि खर्च भइरहेको छ । अन्य गाउँपालिकाभन्दा यो गाउँपालिका भिन्न छ । किनभने म जनताका लागि लड्दै र भिड्दै आएको मान्छे हुँ । जनताले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ र जनताका लागि आएको पैसा हिनामिना हुनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । जनतालाई कसरी सेवा सुविधा दिन सक्छौं त्यसरी नै लागिरहेका छौं । पहिला जनताले जुन किसिमका समस्याहरू भोगिरहेका थिए त्यसबाट मुक्ति मिलेको छ । अहिले हामी जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिन सफल भएका छौं ।
० भनेपछि यो नारा पाल्हीनन्दनवासीले महसुस गरेका छन् ?
— हो, महसुस गरेका छन् । तर कतिपय कुरामा हामी सिक्ने क्रममा छौं । हामी जादू छडी होइनौं कि एकैचोटि सबै कुरा पूरा भइहाल्छ । नेपालमा पहिलोपटक संघीयता आएकोले जनताका चाहना र आकांक्षा असीमित छन् । तर, हामी विस्तारै ती आकांक्षा र चाहना पूरा गर्ने क्रममा छौं । समयसापेक्षअनुसार योजना बनाएर हामी काम गरिरहेको छु ।
० मुलुकमा कर आतंक बढ्यो भन्ने गुनासाहरू छन्, तपाइँको गाउँपालिका करको अवस्था के छ ?
— केही व्यक्तिहरूले कर आतंक भयो भनेर हल्ला फिजाए तर हामीले विगतमा करका जुन दायरा थियो त्यहींअनुसार अहिले पनि छ । यसले जनतामा कुनै असर परेको छैन । जुन किसिमले हल्ला फिजाइएको छ त्यसरी केही पनि छैन । किनभने म यहाँका जनताको मनोभावना बुझेको छु ।
० यस वर्षको बजेटमा नयाँ के–के छन् ?
— हामीले यस वर्षको बजेटबाट नगर प्रहरी राखेका छौं । मेरो उद्देश्य के छ भने पाल्हीनन्दनवासीलाई कसरी सेवामुखी बनाउने । त्यसरी म लागेको छु । अहिले हामी कृषिलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । आर्थिक आम्दानीमा हामी विशेष ध्यान दिएका छौं । यसैगरी, पहिला सरसफाई त्यति थिएन, अहिले हामी सरसफाईलाई पनि विशेष जोड दिएका छौं ।
० निर्वाचनका बेला के–कस्ता वाचाहरू गर्नुभएको थियो ?
— मैले निर्वाचनका बेला भनेको थिएँ कि यदि म निर्वाचित भए भने जनतालाई कृषिमुखी बनाउँछु र युवाहरूलाई रोजगारको सुनिश्चितता गर्छु । त्यसैले मैले जुन वाचा गरेको थिएँ, त्यहीं पूरा गर्न लागेको छु । मैले दिदीबहिनीहरूलाई घरमा बसी बसी रोजगार दिन्छु भनेको थिएँ । त्यहींअनुसार हामी विभिन्न सीपमूलक तालिम पनि दिइरहेका छौं ।
० तपाइँ आफ्नो कार्यकालमा गाउँपालिका कस्तो बनाउने योजना छ ?
— म आफ्नो कार्यकालमा पाल्हीनन्दनलाई नेपालकै नमुना बनाएर देखाउँछु ।